Famatsiana :: Tokantrano an-jatony nisitraka rano fisotro sy fidiovana ary fanadiovana • AoRaha
Famatsiana Tokantrano an-jatony nisitraka rano fisotro sy fidiovana ary fanadiovana
Afaka ny olana. Tokantrano roanjato ao amin’ny kaominina ambanivohitra Fiaferana no misitraka rano fisotro sy fidiovana ary fanadiovana. Nahazo toho-drano, paompy ary fanasan-damba ny mponina ao amin’ity
Voatery mandeha iray kilaometatra vao afaka mahazo rano fisotro sy ny fidiovana ary rano ampiasaina amin’ny fambolena ny mponina. “Sady manondraka tanimbary velarana 150ha ity toho- drano ity no mamatsy rano fisotro madio tokantrano manodidina ny roanjato. Vohitra miisa dimy, Ambohitriniandriana, Mahatazana, Tsiazompaniry sy Ambondrona ary Ambohidrakitra no hahazo famatsian-drano. Misy paompy efatra ambin’ny folo ao anatin’ ireo vohitra ireo”, hoy Ranaivoson Hanitra, Ben’ ny tanànan’ny kaominina Fiaferana.
Nanomboka, tamin’ny taona 2015, no vaky ity toho- drano ity. Telo taona aty aoriana vao vita ny asa fanam- boarana sy fanavaozana.
Ny avy ao amin’ny Foibem-paritry ny fanjarian- tsakafo na ny ORN Analamanga no nanolotra ny fotodrafitrasa. “Tafiditra amin’ny fanatanterahana sy ny tanjona napetraky ny paikadim-pirenena izao fanolorana fotodrafitrasa ho an’ny rano fisotro madio izao. Herintaona no nanaovana fitsirihana amin’ny fanatanterahana azy niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’ antoka”, hoy kosa Randriakotomihaja James Odon, mpandrindram-paritry ny ORN Analamanga.
Hatreto, mbola ny 75%-n’ny mponina ao Fiaferana ihany no mahazo rano. Misy fokontany iray tena tsy misy rano mihitsy, dia ny fokontany Ambohi- marina Andrefana. Nanome asa ireo sahirana ara-pivelomana ihany koa ny fanamboarana an’izao fotodrafitrasa izao, tamin’ny alalan’ny asa tana-maro.